लुम्बिनी अस्पताललाई अत्याधुनिक बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी
लुम्बिनी अस्पताललाई अत्याधुनिक बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी अस्पतालका ७३ सटर भत्काइँदै, व्यवसायी भन्छन् : सरकारको निर्णयले हाम्रो उठिबास हुन्छ
विकाश पराजुली बुटवल, २८ साउन
बुटवलमा रहेको एक सय वर्ष पुरानो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश ५ सरकारले सुधार एवं व्यवस्थित गर्ने भएको छ । प्रदेश ५ सामाजिक विकास मन्त्रालयको योजनाअनुसार अस्पताललाई प्रदेशको गौरवको आयोजनामा समावेश गरेर व्यवस्थित बनाउन लागिएको हो । अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत छ ।
'सम्पूर्ण रोगको विशेषज्ञ सुविधासहितको आधुनिक अस्पताल बनाउने योजनाअनुसार काम सुरु गरिएको छ,' सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले भने, 'गौरवको आयोजनामा राखेर अस्पतालको विकास गरेमा यस क्षेत्रका नागरिकको सर्वसुलभ उपचार पाउनेछन् ।'
पहिलो चरणमा अस्पतालका सटर भत्काइएको छ । सटरबाट हुने आम्दानीबराबरको रकम प्रदेश सरकारबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी सबै संरचना भत्काएर आधुनिक बनाइने मन्त्री बरालको भनाइ छ ।
वार्षिक २ लाखभन्दा बढी बिरामीको उपचार हुने अस्पताल ६ दशमलव २९ कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण खनालले यस क्षेत्रको केन्द्रमा रहेको अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारबाट आएको निर्देशनलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्ने बताए । उनले सटर भत्काउने विषयमा व्यवसायीलाईसमेत धेरै मर्का नपर्ने गरी सरकारले काम गर्ने र सहमतिमा उल्लिखित बुँदाकै आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।
सटहरु हटाइँदै, वार्षिक ९ करोड आम्दानी
अस्पतालले विगत २७ वर्षदेखि भाडामा लगाउँदै आएको ७३ वटा सटरबाट वार्षिक ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । अस्पतालको सुधार र व्यवस्थित गर्ने प्रदेश ५ सरकारले बताएपछि सबै सटर उक्त अस्पताल परिसरबाट हट्नेछन् ।
अस्पतालको जग्गामा रहेका ७३ वटा सटर टेन्डरमार्फत भाडामा लगाएको दुई महिना पनि पुगेको छैन । २८ फागुन २०७५ मा टेन्डर आह्वान भएर २९ जेठदेखि लागू हुने गरी व्यवसायीहरुसँग सम्झौता भएको छ ।
भर्खर टेन्डर सम्झौता गरेर बसेका व्यवसायीहरु भने सजिलै हट्ने पक्षमा छैनन् । अस्पतालको सटर नम्बर ५९ मा रहेको मेडिक्रस फार्मेसीले अस्पताल विकास समितिलाई मासिक ५ लाख १५ हजार ५ सय ९९ भाडा बुझाउने गरेको छ । उक्त फार्मेसीले अस्पताललाई सबैभन्दा बढी भाडा बुझाउने गरेको हो ।
धरौटी रकम फिर्ता गर्छौः मन्त्री बराल
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल परिसरभित्र रहेका फार्मेसी र पसलहरु सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीको टेन्डरको धरौटी रकम फिर्ता गर्ने सामाजिक विकासमन्त्री बरालले बताए । उनले उक्त संरचना भत्काउनु अघि भाडा बाहेकको रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट पारे । आम्दानीका नाममा सरकारी अस्पतालकै गेटमा निजी फार्मेसी राख्न उचित नभएको बताए ।
अस्पतालाई अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री अस्पताल बनाउने योजना बनाएको प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना अगाडि सारेको छ । उत्तरपट्टिको पेट्रोल पम्पसहित सबै जग्गा खाली गराई अत्याधुनिक भवन बनाउने र इलाका बनेको जग्गा खाली गराउने योजना प्रदेश सरकारको छ ।
इलाका प्रशासनमा कृषि मन्त्रालय लैजाने, डाक्टरहरुको आवास क्षेत्र अन्यत्रै सारेर त्यहाँ पनि भवन बनाउने योजना रहेको मन्त्री बरालले सुनाए । त्यसैगरी, मेडिकल स्टोरलाई बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउने, निर्माणको सबै खर्च प्रदेश सरकारले बेहाेर्ने र सबै पुराना संरचना भत्काउने योजना प्रदेश सरकारको छ ।
के भन्छन् व्यवसायी ?
सरला नेपाल, भैरव मेडिकल
१५ वर्ष भयो व्यापार गर्न थालेको । पाँच/पाँच वर्षमा टेन्डर हुनुपर्छ भनेपछि हामीले मानेका हौं । हामीले लाखाैं खर्च गरेर काम गरेका छौं । सरकारको यो निर्णयले हामी केही व्यवसायी मानसिक औषधि खानेसमेत भयौं । यस्तो गर्नु थियो भने टेन्डर गर्नुपर्ने थिएन । हामीलाई क्षतिपूर्ति त दिनुपर्‍याे । हामी सबै पीडित भएका छौं । घरखेत धितो राखेर पसल गरेका छौं । हामीलाई सरकारले विस्थापित गर्‍यो ।
गणेश शर्मा, न्यु बुटवल फर्मा
हामी २ महिनाअघि टेन्डर गरेअनुसार सहभागी भयौं । जग्गा धितो राखेर ऋण निकालेका हौं । ३ महिनामै सरकारले हामीलाई विस्थापित गर्न थाल्यो । दुई तिहाइको बलियो सरकारले जनतालाई सुख देला भन्दा भिकारी बनाउने भयो । यो निर्णय गलत हो ।
गगनराज क्षेत्री, दोभान फार्म
३ महिनाअगाडि भएको टेन्डरअनुसार सबै व्यवसायी सहभागी भएका छन् । हामीलाई टेन्डर पनि परेको हाेइन । मिलेर व्यवसायी गर्न थालेका हाैं । हामीलाई अझै पत्र त आएको छैन । हामीलाई मर्का परेको छ । सम्बन्धित निकायले यसलाई ध्यान दिनुपर्‍याे ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २८, २०७६, ०७:३१:००
बुद्धको जन्मस्थल नेपाल श्रीलंकालीको मुटुमा छः राजापाक्षे
गोरखापत्र संस्थानका पूर्व उप–सम्पादक पोखरेलविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा
घरभित्रै श्रेष्ठ दम्पतीको हत्या गर्नेको अझै पत्ता लागेन
लोकसेवा आयोग सदस्यको तलब ५० हजार ६ सय
कोइलाबासः कुनै बेला ‘नसुत्ने शहर’, अहिले ‘मृत शहर’
६ करोडमा बनेको पशु वधशाला सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण
बुटवलमा चार लेनको सडक विस्तारले लियो गति
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तीन महिना पछि धकेलिने
डढेलोको धुवाँमा छोपियो अस्ट्रेलियाको ठूलो सहर सिड्नी
ब्ल्याक होलको डरले, आकाशगंगाबाट भाग्दै छ तारा
अघोरी बाबाकी श्रीमतीसँग काठमाडौंमा १७ करोडको घर !
को हुन् डा. रूप ज्योतिको परिवारविरुद्ध जाहेरी दिने विज्ञेन्द्रकृष्ण ?
ठमेलको नाइट क्लबमा कम्मर मर्काइमर्काइ नाचे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह
मुहार फेर्दै रंगशाला
कीर्तिपुरमा सचिनका सुत्र
डेस्क पूजा परियार घनेन्द्र ओझा (फिचर संयाेजक) जीपी देवकाेटा नवराज कुँवर चक्र धमला